19.07.20 Avyakt Bapdada Nepali Murli 25.02.86 Om Shanti Madhuban
डबल विदेशी भाइ बहिनीहरूको समर्पण समारोहमा अव्यक्त बापदादा का महावाक्य
आज बापदादाले विशेष श्रेष्ठ दिनको विशेष स्नेहभरि बधाई दिइरहनु भएको छ। आज कुनचाहिँ समारोह मनायौ? बाहिरको दृश्य त सुन्दर थियो नै। तर सबैको उमंग-उत्साह र दृढ संकल्पको, दिलको आवाज पनि दिलाराम बाबाको पासमा पुगेको थियो। त्यसैले आजको दिनलाई विशेष उमंग-उत्साहले भरिएको दृढ संकल्प समारोह भनिन्छ। जबदेखि बाबाको बन्यौ तबदेखि सम्बन्ध छ र रहन्छ। तर यो विशेष दिनलाई विशेष रूपले मनायौ त्यसैले यसलाई भनिन्छ दृढ संकल्प गर्यौ। जे सुकै होस्, चाहे मायाको तुफान आओस्, चाहे मानिसका अनेक थरीका कुरा आऊन्, चाहे प्रकृतिको कुनै पनि हलचलको दृश्य होस्, चाहे लौकिक वा अलौकिक सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको परिस्थिति होस्, मनको संकल्पको धेरै जोडको तुफानै होस् तर पनि एक बाबा दोस्रो न कोही हुनु छ। एक बल एक भरोसा– यस्तो दृढ संकल्प गरिसक्यौ वा केवल मञ्चमा मात्र बसेका छौ! डबल मञ्चमा बसेका छौ वा सिंगल मञ्चमा? एउटा थियो यो स्थूल मञ्च, अर्को थियो दृढ संकल्पको मञ्च, दृढताको मञ्च। त्यसैले डबल मञ्चमा बसेका थियौ नि। हार पनि धेरै सुन्दर पहिरियौ। केवल त्यो हार लगायौ वा सफलताको पनि हार लगायौ? सफलता गलाको हार हो। यो दृढता नै सफलताको आधार हो। यो स्थूल हारको साथमा सफलताको हार पनि थियो नि। बापदादाले डबल दृश्य देख्नुहुन्छ। केवल साकार रूपको दृश्य देख्नुहुन्न। तर साकार दृश्यको साथसाथमा आत्मिक अवस्था, मनको दृढ संकल्प र सफलताको श्रेष्ठ माला यी दुवै देखिरहनु भएको थियो। डबल माला, डबल मञ्च देखिरहनु भएको थियो। सबैले दृढ संकल्प गर्यौ? धेरै राम्रो। जेसुकै होस् तर सम्बन्धलाई निर्वाह गर्नु छ। परमात्म प्रीतिको रीति सदा निर्वाह गर्दै सफलता प्राप्त गर्नु छ। निश्चित छ सफलता गलाको हार हो। एक बाबा दोस्रो न कोही– यस्तो दृढ संकल्प होस्। जब एक हुनुहुन्छ भने एकरस स्थिति स्वत: र सजिलै हुन्छ। सर्व सम्बन्धको अविनाशी तार जोडेका छौ नि। यदि एउटा पनि सम्बन्ध कम भयो भने हलचल हुन्छ त्यसैले सर्व सम्बन्धको डोरी बाध्नु छ। सम्बन्ध जोड्यौ। संकल्प गर्यौ। सर्व सम्बन्ध छ वा केवल मुख्य ३ सम्बन्ध मात्र छन्? सर्व सम्बन्ध छ भने सर्व प्राप्ति पनि छ। सर्व सम्बन्ध भएन भने कुनै न कुनै प्राप्तिको कमी हुन्छ। सबैको समारोह भयो नि! दृढ संकल्प गर्नाले अगाडि पुरुषार्थमा पनि विशेष रूपले लिफ्ट मिल्छ। यो विधिले पनि विशेष उमंग-उत्साह बढाउँछ। बापदादाले पनि सबै बच्चाहरूलाई दृढ संकल्प गर्ने समारोहको बधाई दिनुहुन्छ र वरदान दिनुहुन्छ– सदा अविनाशी भव। अमर भव।
आज एसियाको ग्रुप बसेको छ। एसियाको विशेषता के हो? विदेश सेवाको पहिलो ग्रुप जापान गएको थियो। यो विशेषता भयो नि। साकार बाबाको प्रेरणा अनुसार विशेष विदेश सेवाको निमन्त्रणा र सेवाको आरम्भ जापानबाट भएको हो। त्यसैले एसियाको नम्बर स्थापनामा अगाडि भयो नि। पहिलो विदेशको निमन्त्रणा थियो। अरू धर्मकाले निमन्त्रणा दिएर बोलाउने सुरुवात एसियाबाट भयो। त्यसैले एसिया कति भाग्यमानी छ! र अर्को विशेषता हो– एसिया भारतको सबैभन्दा समीप छ। जो समीप हुन्छ त्यसलाई सिकीलधे भनिन्छ। सिकीलधे बच्चाहरू छिपेर रहेका छन्। हरेक स्थानबाट कति राम्रा-राम्रा रत्नहरू निस्किएका छन्। संख्या कम छ तर पनि गुणवान छन्। मेहनतको फल राम्रो छ। यसरी विस्तारै-विस्तारै अब संख्या बढिरहेको छ। सबै स्नेही छन्। सबै प्यारा छन्। हरेक एक अर्का भन्दा धेरै स्नेही छन्। यही ब्राह्मण परिवारको विशेषता हो। हरेकले यो अनुभव गर्छ कि मेरो सबैभन्दा धेरै स्नेह छ र बाबाको पनि मसँग धेरै स्नेह छ। मलाई नै बापदादाले अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यसैले भक्तिमार्गकाले पनि धेरै राम्रो एउटा चित्र अर्थ सहित बनाएका छन्। हरेक गोपीको साथमा बल्लभ देखाउँछन्। केवल एक राधासँग वा केवल ८ पटरानीहरूसँग मात्र होइन। हरेक गोपीसँग गोपी वल्लभ हुन्छन्। जसरी दिलवाला मन्दिरमा जाँदा विचार गर्छौ नि– यो मेरो चित्र हो अथवा मेरो भवन हो भनेर। त्यसैगरी यो रास मण्डलमा पनि तिमीहरू सबैको चित्र छ। यसलाई भनिन्छ नै महारास। यो महारासको धेरै ठूलो गायन छ। बापदादाको हरेकसँग एक अर्काको भन्दा धेरै प्यार छ। बापदादा हरेक बच्चाको श्रेष्ठ भाग्यलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। जो भए पनि तर करोडौंमा कोही छौ। पदमापदम भाग्यवान छौ। दुनियाँको हिसाबले हेर्यौ भने यत्तिका करोडौंमा कोही छौ नि। जापान त कत्ति ठूलो छ तर बाबाका बच्चा कति छन्? त्यसैले करोडौंमा कोही भयौ नि। बापदादाले हरेकको विशेषतालाई, भाग्यलाई हेर्नुहुन्छ। करोडौंमा कोही सिकीलधे हौ। बाबाको लागि सबै विशेष आत्मा छौ। बाबाले कसैलाई साधारण कसैलाई विशेष देख्नुहुन्न। सबै विशेष छौ। यतातिर अझ धेरै वृद्धि हुनु छ किनकि यो पूरा क्षेत्रमा डबल सेवा विशेष छ। एक त अनेक बेग्ला-बेग्लै धर्मका छन्। यतातिर सिन्धबाट आएका आत्माहरू पनि धेरै छन्। तिनीहरूको सेवा पनि राम्रोसँग गर्न सक्छौ। तिनीहरूलाई समीप ल्यायौ भने तिनीहरूको सहयोगले अरू धर्मसम्म पनि सजिलै पुग्न सक्छौ। डबल सेवाले डबल वृद्धि गर्न सक्छौ। तिनीहरूमा कुनै न कुनै रीतिले चाहे उल्टो रूपमा वा सुल्टो रूपमा बीज परेको छ। परिचय भएको कारणले सजिलै सम्बन्धमा आउन सक्छन्। धेरै सेवा गर्न सक्छौ किनकि सर्व आत्माहरूको परिवार हो। ब्राह्मणहरू सबै धर्ममा छरिएका छन्। यस्तो कुनै धर्म छैन जसमा ब्राह्मण नपुगेको होस्। अब सबै धर्मबाट निस्किदै आइरहेका छन्। र जो ब्राह्मण परिवारका हुन्छन् तिनीहरूसँग आफ्नोपन हुन्छ नि। जस्तै कोही हिसाब-किताबले गएकाहरू फेरि फर्किएर आफ्नो परिवारमा पुगेका छन्। कहाँ-कहाँबाट पुगेर आफ्नो सेवाको भाग्य लिन निमित्त बनेका छन्। यो कुनै कम भाग्य होइन। धेरै श्रेष्ठ भाग्य हो। सबैभन्दा महान पुण्य आत्मा बन्छन्। महादानी, महान सेवाधारीको लिस्टमा आउँछन्। त्यसैले निमित्त बन्नु पनि एउटा विशेष गिफ्ट हो र डबल विदेशीहरूलाई यो गिफ्ट मिल्छ। थोरै अनुभव गर्नासाथ निमित्त बन्छन् सेन्टर स्थापना गर्न। त्यसैले यो पनि लास्ट सो फास्ट जाने विशेष गिफ्ट हो। सेवा गर्नाले धेरैको स्मृतिमा रहन्छ– जसरी हामीहरूले निमित्त भएर सेवा गर्छौ अथवा चल्छौं हामीलाई हेरेर अरूले पनि गर्नेछन्। त्यसैले यसमा डबल ध्यान दिनु पर्नेहुन्छ। डबल ध्यान दिनु पर्नाले डबल लिफ्ट हुन जान्छ। बुझ्यौ– डबल विदेशीहरूलाई डबल लिफ्ट छ। अहिले सबैतिर धरनी राम्रो भएको छ। हलो चलाए पछि धरनी ठीक हुन्छ नि। र, फेरि फल पनि राम्रो र सजिलै निस्कन्छ। अच्छा। एसियाको ठूलो माइकको आवाज भारतमा चाँडै पुग्ने छ, त्यसैले यस्ता माइक तयार गर। अच्छा।
बडी दा दी हरूसँग :– तिम्रो महिमा पनि के गरौं! जसरी बाबाको लागि भन्छन् नि– सागरलाई मसी बनाऊ, धरनीलाई कागज बनाऊ... त्यस्तै तिमीहरू सबै दादीहरूको महिमा छ। यदि महिमा सुरु गर्ने हो भने सारा रात-दिन एक सप्ताहको कोर्स हुने छ। राम्रो छ, सबैको रास राम्रो छ। सबैको राशि मिल्छ र सबैले रास गर्दा राम्रो लाग्छ। हातमा हात मिलाउनु अर्थात् विचार मिलाउनु यही रास हो। बापदादाले पनि दादीहरूको यही रास हेरिरहनुहुन्छ। अष्ट रत्नहरूको रास यही हो।
तिमी दादीहरू परिवारका विशेष श्रृङ्गार हौ। यदि श्रृङ्गार भएन भने पनि शोभा हुँदैन। सबैले त्यही स्नेहले हेर्छन्।
बृजइन्द्रा दादी सँगः– बचपनदेखि लौकिकमा, अलौकिकमा श्रृङ्गार गरिरहेकी छौ र गर्दा-गर्दा श्रृङ्गार बन्यौ। यस्तो हो नि! बापदादाले महावीर, महारथी बच्चाहरूलाई सदैव याद मात्रै त के समाहित छन्। जो समाहित छ, उसलाई याद गर्ने पनि आवश्यकता पर्दैन। बापदादाले सदा हरेक विशेष रत्नहरूलाई विश्वको अगाडि प्रत्यक्ष गर्नुहुन्छ। त्यसैले विश्वको अगाडि प्रत्यक्ष हुने विशेष रत्न हौ। सबैको खुसीको थप मदत छ। तिमीलाई खुसी देखेर सबैलाई खुसीको खुराक मिल्छ त्यसैले तिमीहरू सबैको आयु बढिरहेको छ किनकि सबैको स्नेहको आशीर्वाद मिलिरहन्छ। अब धेरै कार्य गर्नु छ, त्यसैले तिमीहरू श्रृङ्गार हौ परिवारका। सबैले कति प्यारले हेर्छन्। जस्तै कसैको छत्र उत्रियो भने सिर कस्तो देखिन्छ? छत्र ओढ्नेले यदि छत्र ओढेन भने कस्तो लाग्छ? त्यसैले तिमीहरू सबै पनि परिवारका छत्र हौ।
निर्मलशान्ता दादीसँग:– आफ्नो यादगार सदा मधुबनमा देखिरहेकी छौ? यादगार हुन्छन् याद गर्नको लागि। तर तिम्रो यादले यादगार बनाइदिन्छ। हिँड्दा-डुल्दा सबै परिवारलाई निमित्त बनेका तिमी आधारमूर्तहरू याद आइरहन्छौ। त्यसैले आधारमूर्त हौ। स्थापनाको कार्यका आधारमूर्त मजबुत भएको कारणले यो वृद्धिको, उन्नतिको भवन कति मजबुत भइरहेको छ। कारण? आधार मजबुत छ। अच्छा।
डबल लाइट बन ( अव्यक्त मुर ली हरूबाट चुनिएका अनमोल रत्नहरू )
डबल लाइट अर्थात् आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुनाले स्वत: हल्कापन हुन जान्छ। यस्ता डबल लाइटलाई नै फरिश्ता भनिन्छ। फरिश्ता कहिल्यै कुनै पनि बन्धनमा बाँधिदैनन्। यस पुरानो दुनियाँको, पुरानो देहको आकर्षणमा आउँदैनन् किनकि हुन्छन् नै डबल लाइट।
डबल लाइट अर्थात् सदा उड्तीकलाको अनुभव गर्नेवाला किनकि जो हल्का हुन्छन् तिनीहरू सदा माथि उड्दछन् र बोझ भएकाहरू तल आउँछन्। डबल लाइट आत्मा अर्थात् कुनै बोझ नभएका किनकि कुनै पनि बोझ भयो भने उच्च स्थितिमा उड्न दिँदैन। डबल जिम्मेवारी भएर पनि डबल लाइट रहनाले लौकिक जिम्मेवारीले कहिल्यै थकाउँदैन किनकि निमित्त छौ। निमित्तलाई केको थकावट। आफ्नो गृहस्थी, आफ्नो प्रवृत्ति सम्झियौ भने बोझ हुन्छ। आफ्नो हुँदै होइन त्यसैले बोझ कुन कुराको? बिलकुल न्यारा र प्यारा। बालक सो मालिक।
सदा स्वयंलाई बाबाको हवाला गर्यौ भने सदा हल्का रहन्छौ। आफ्नो जिम्मेवारी बाबालाई देऊ अर्थात् आफ्नो बोझ बाबालाई दियौ भने स्वयं हल्का हुन्छौ। बुद्धिले समर्पण बन। यदि बुद्धिले समर्पण भयौ भने अरू कुनै कुरा बुद्धिमा आउँदैन। सबैथोक बाबाको हो। जब सबैथोक बाबाको भएपछि फेरि बाँकी केही रहेन। डबल लाइट अर्थात् संस्कार स्वभावको पनि बोझ छैन, व्यर्थ संकल्पको पनि बोझ छैन– यसलाई भनिन्छ हल्का। जति हल्का हुन्छौ त्यति सजिलै उड्ती कलाको अनुभव गर्छौ। यदि योगमा अलिकति पनि मेहनत गर्नु पर्छ भने अवश्य कुनै बोझ छ। त्यसैले बाबाको आधार लिएर उड्दै जाऊ।
सदा यही लक्ष्य याद रहोस्– मलाई बाबा समान बन्नु छ। जसरी बाबा लाइट हुनुहुन्छ त्यस्तै डबल लाइट। अरूलाई हेर्छौ अनि कमजोर हुन्छौ त्यसैले बाबालाई हेर, बाबालाई अनुसरण गर। उड्ती कलाको श्रेष्ठ साधन केवल एउटा शब्द छ– सबैथोक हजुरको। “मेरो” शब्दको बदला “हजुरको” भन्नु छ। हजुरको हुँ भन्यौ भने आत्मा लाइट हुन्छ र सबैथोक बाबाको भए पछि लाइट बन्छौ। जसरी सुरु-सुरुमा अभ्यास गर्थ्यौ– हिँडिरहेका हुन्थ्यौ तर स्थिति यस्तो हुन्थ्यो जस्तै अरूले सम्झन्थे– लाइट गइरहेको छ। तिनीहरूलाई शरीर देखिँदैनथ्यो र यही अभ्यासले हरेक प्रकारको परीक्षाबाट पास भयौ। अब जबकि समय बहुत खराब आइरहेको छ त्यसैले डबल लाइट रहने अभ्यासलाई बढाउनु छ। अरूलाई सदैव तिम्रो लाइट रूप देखियोस्– यही सुरक्षा हो। भित्र आऊन् तर लाइटको किल्ला देखियोस्।
जसरी लाइटको कनेक्शनले ठूला-ठूला मेसिनहरू चल्छन् त्यसैगरी तिमीहरू सबैले हरेक कर्म गर्दा कनेक्शनको आधारले स्वयं डबल लाइट बनेर चलिराख्नु छ। जहाँ डबल लाइटको स्थिति हुन्छ त्यहाँ मेहनत र मुश्किल समाप्त हुन्छ। आफ्नोपनलाई समाप्त गरेर निमित्त भाव र ईश्वरीय सेवाको भावना भयो भने डबल लाइट बन्छौ। कसैले पनि तिम्रो समीप सम्पर्कमा आउँदा महसुस गरून्– यिनीहरू रूहानी हुन्, अलौकिक हुन भनुन्। तिनीहरूलाई तिम्रो फरिश्ता रूप नै देखियोस्। फरिश्ता सदा माथि रहन्छन्। फरिश्ताहरूलाई चित्रमा पनि देखाउँदा पंख भएका देखाउँछन् किनकि उड्ता पंछी हुन्छन्।
सदा खुसीमा झूल्ने र सर्वको विघ्न हर्ता वा सर्वको मुश्किललाई सहज गराउने तब बन्न सक्छौ जब संकल्पमा दृढता हुन्छ र स्थिति डबल लाइट हुन्छ। मेरो केही पनि छैन, सबैथोक बाबाको हो। जब बोझ आफू माथि राख्छौ तब सबै प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्। मेरो भएन भने निर्विघ्न हुन्छौ। सदा आफूलाई डबल लाइट सम्झेर सेवा गर्दै जाऊ। जति सेवामा हल्कापन हुन्छ त्यति सजिलै उड्छौ र उडाउँछौ। डबल लाइट भएर सेवा गर्नु, यादमा रहेर सेवा गर्नु– यही सफलताको आधार हो।
जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्नु पनि आवश्यक छ तर जति धेरै जिम्मेवारी त्यति नै डबल लाइट। जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा जिम्मेवारीको बोझबाट न्यारा रहनु छ, यस्तालाई भनिन्छ बाबाको प्यारा। नआत्तिऊ– के गर्ने, धेरै जिम्मेवारी छ। यो गरौँ वा नगरौँ.... यो त धेरै मुश्किल छ। यस्तो महसुस हुनु अर्थात् बोझ छ। डबल लाइट अर्थात् यसबाट पनि न्यारा हुनु छ। कुनै पनि जिम्मेवारीको कर्मको हलचलको बोझ नहोस्। सदा डबल लाइट स्थितिमा रहनेवाला निश्चय बुद्धि, निश्चिन्त हुन्छन्। उड्तीकलामा रहन्छन्। उड्तीकला अर्थात् उच्च भन्दा उच्च स्थिति। यस्ताको बुद्धिरूपी पाउ धरनीमा हुँदैन। धरनी अर्थात् देहभानबाट माथि। जो देहभानको धरनीदेखि माथि रहन्छन् तिनीहरू सदा फरिश्ता हुन्छन्।
अब डबल लाइट बनेर दिव्य बुद्धि रूपी विमानद्वारा सबैभन्दा उच्च स्थानमा स्थित भएर विश्वका सर्व आत्माहरू प्रति लाइट र माइटको शुभ भावना र श्रेष्ठ कामनाको सहयोगको लहर फैलाऊ। यस विमानमा बापदादाको शुद्ध र श्रेष्ठ मतको साधन होस्। त्यसमा अलिकति पनि मनमत,परमतको फोहोर नहोस्। अच्छा। रूहानी बच्चाहरूलाई रूहानी बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
ह र सेकेण्ड हर संकल्पको महत्त्वलाई जानेर पुण्यको पुँजी जम्मा गर्ने पदमापदम पति भव
तिमी पुण्य आत्माहरूको संकल्पमा यति विशेष शक्ति हुन्छ जुन शक्तिद्वारा असम्भवलाई सम्भव बनाउन सक्छौ। जसरी आजकल यन्त्रद्वारा मरुभूमिलाई हरियाली बनाउँछन्, पहाडीमा फूल उमार्छन् त्यसैगरी तिमीहरूले आफ्नो श्रेष्ठ संकल्पद्वारा निराश भएकालाई आशावादी बनाउन सक्छौ। केवल हरेक सेकेण्ड हर संकल्पको मूल्यलाई जानेर सेकेण्ड र संकल्पलाई प्रयोग गरेर पुण्यको पुँजी जम्मा गर। तिम्रो संकल्पको शक्ति यति श्रेष्ठ हुन्छ जुन एउटा संकल्पले पनि पदमापदम पति बनाउन सक्छ।
हरेक कर्म अधिकारीपनको निश्चय र नशाले गरेमा मेहनत समाप्त हुन्छ।
सूचना:– आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो।